सपिङ कम्प्लेक्स पुगेकी महिलाको कपालमा सर्प ! (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > सपिङ कम्प्लेक्स पुगेकी महिलाको कपालमा सर्प ! (भिडियो सहित)
सपिङ कम्प्लेक्स पुगेकी महिलाको कपालमा सर्प ! (भिडियो सहित)
admin November 24, 2021 भिडियो, रोचक 0
एजेन्सी । सामान्यता मानिसहरु सर्प देखेर डराउने गर्दछन् र परै भाग्दछन् ।
तर, विश्वमा आटिँला मानिसको कमी छैन । जो सर्पसंग खेल्ने मात्र होइन केहीले त यसलाई शरीरमा बोकेरसमेत हिँड्छन् । यस्तै एक भिडियो अहिले भाइरल बनेको छ । जहाँ एक महिलाले कपालको जुरो बाध्न जिउँदो सर्प प्रयोग गरेकी छिन् ।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको भिडियोमा ती महिलाको हर्कतले उनको सर्पप्रतिको प्रेम र उनको बहादुरीता दुबै देखिन्छ । ती महिला आफ्नो किनमेल गर्न सपिङ कम्प्लेक्समा जाँदा कपालको जुरोमा सर्प बेरेर पुगेकी थिइन् ।
यसरी कपालमा सर्प बेरेर किनमेल गर्न सपिङ कम्प्लेक्स जाँदा उनले खैरो रंगको कपाल बाध्ने रबर जस्तोले कपालको जुरो बाधेको देखिए पनि वास्तविकतामा त्यो सर्प हुन्छ । उनको यो आँटलाई सामाजिक सञ्जालमा धेरैले तारिफ गरेका छन् भने कतिले जीव माथिको अत्याचार भनेर आलोचना समेत गरेका छन् । स्रोतः जी न्यूज
चिठ्ठा किन्दा यी व्यक्ति बने एकाएक अरबपति!
नेपाल एयरलाइन्सको ट्विनअटरबाट रूकुम हिडेका यात्रु जब नेपालगञ्जमा उतारिएपछि…
नर्भिक अस्पतालबाट बाहिरियो निशाको खुशीकाे भिडियो, विस्तारै बोल्न थालिन् (हेर्नुस् भिडियो )
वेवारिसे श’व भनेर फेवातालवाट वाहिर निकाले, खाेलेर हेर्दा आफ्नै भाई परेपछि दाई कृष्णकाे उड्याे हाेस! (भिडियो सहित)